“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၁၂)- မိုးရိပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » “နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၁၂)- မိုးရိပ်
“နှလုံးသားလက်ဆောင်” အပိုင်း(၁၂)- မိုးရိပ်
Posted by aung nainglin on May 31, 2012 in Copy/Paste |3comments
တစ်နေ့ ပြီးတစ်နေ့ ပြောင်းလဲသွားခဲ့ သော်လည်း သတိရတဲ့ စိတ်က ရင်ထဲမှာပြည့် နေခဲ့ လေသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူငယ်ချင်းတွေကို ကျေးဇူးတင်မိပါသည်။အရာရာအားလုံးကိုလိုလေသေးမရှိဖြည့် စည်းပေးတဲ့ အတွက်ပေါ့။ သူ့ ရဲ့ ဘ၀က အမေလဲမရှိ ချစ်သူကလဲမရှိ ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့တဲ့ ဘ၀မှာ အသက်ဆက်ရှင်နေရင်အားလုံးကို ဒုက္ခတွေပေးသလိုဖြစ်နေပြီလေ အဲ့ ဒီအတွက် သူတစ်ခုခုတော့ဆုံးဖြတ်ရမည်လေ။
“ဟဲ့ရွှေရည် ကန်ဘောင်ပေါ်သွားမယ်ဟယ်………မထိုင်ဖြစ်တာကြာနေပြီလေ…..”
“ဟဲ့ဟိုမှာ အစ်ကိုမင်းဇော်ရဲ့သူငယ်ချင်း အစ်ကိုမင်းခန့် မလား……”
“သူ့ ဟာသူလာတာဘာဖြစ်လဲဟယ်………လာပါလေ့ စေပေါ့…….”
“အစ်ကိုမင်းခန့်ဘယ်သွားမလို့ လဲ……”
“အင်း ရွှေရည်တို့ကိုတွေ့ လိုက်လို့လိုက်လာခဲ့ တာလေ…..”
“ထူးထူးဆန်းဆန်းပါလား အစ်ကိုရဲ့ ……”
“ပြောစရာလဲရှိလို့ လေ….ပြီးတော့ ပေးစရာလဲရှိလို့ ပါ……”
“မင်းဇော်အကြောင်းဆိုရင်မပြောပါနဲ့ …ကျမ မကြားချင်ဘူး…….”
“ကိုကလဲ မင်းဇော် အကြောင်းကိုပြောမလို့ လာခဲ့ တာမဟုတ်ပါဘူး……..ဒါပေမဲ့မင်းပြောလိုက်လို့ မပြောမဖြစ်ပြောရတော့မယ်….”
“မပြောပါနဲ့ မကြားချင်ဘူး ကတိမတည်တဲ့ သူ…….”
“အေး….အေး…….ငါတို့ ဆုံးရှုံးလိုက်တာက ငါ့ သူငယ်ချင်းရဲ့ မျက်နှာပေါ်က ပျှော်ရွှင်မှုတွေ….အေး…..ဒါပေမဲ့မင်းဆုံးရှုံးလိုက်တာက သိပ်ချစ်တက်တဲ့နှလုံးသားတစ်စုံကွ…….ဒါတွေကိုထားလိုက်ပါ ဒါပေမဲ့မင်းသူ့ ရဲ့ အချစ်ကို မစော်ကားသင့်ဘူး……“
“ကျမက ဘာတွေစော်ကားလိုက်လို့ လဲ….”
“အဲ့ ဒါတော့ မင်းကိုမင်းအသိဆုံးဖြစ်မှာပါကွာ………”
“မင်းကိုငါမေးမယ် မင်းအမှန်တိုင်ဖြေ………….မင်း ငါ့သူငယ်ချင်းအပေါ်မှာ တကယ်မချစ်ခဲ့ ဘူးမလား…..”
“ဟုတ်တယ်………ကျမ အချစ်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင်မသိဘူး…….”
“မင်းကွာ…….အေး…မင်းသူ့ ကိုချိန်းလိုက်တဲ့ နေ့ ကို မှတ်မိလား….”
“အေး…….သိပ်ကောင်းတယ်…….မင်းကတော့ မင်းဖြစ်ချင်တာပဲ သိတာကို…….အဲ့ ဒီနေ့ က မင်းဇော် ဘာတွေဖြစ်နေလဲမင်းမသိခဲ့ ဘူးမလား…”
“မင်း မသိချင်လဲ ငါကတော့ ပြောရမှာပဲ…….အဲ့ ဒီနေ့ က မင်းဇော် ရဲ့ အမေ ဆေးရုံမှာ ဆုံးသွားတယ်…မင်း အဲ့ ဒါကိုကော သိလား..”
“ရှင် ဘာပြောလိုက်တာလဲ အစ်ကိုမင်းဇော်ရဲ့ အမေ ဆုံးသွားပြီဟုတ်လား……..”
“အေး အဲ့ ဒါကြောင့် မလာနိုင်တာ တကယ်ဆို သူအမေဆုံးလို့အားငယ်နေတဲ့ သူ့ ကို နဲနဲလောက်တော့ နှစ်သိမ့် သင့်တယ် ဒါပေမဲ့ …..မင်းက သူ့ ကိုလမ်းခွဲလိုက်တယ်……..ချစ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘေးနားမှာ အားပေးသင့် တယ်…. ငါမပြောလိုပါဘူး မင်းသူ့ ကို လမ်းခွဲလိုက်လို့မင်းကိုငါတို့ က စိတ်မဆိုးပါဘူး…….”
“ရှင်ပြောတာတွေက အမှန်တွေလား ကျမကိုလိမ်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်…”
“ငါအမှန်တိုင်းပဲ ပြောတက်တယ်…. အရာရာအားလုံးကို ပေးဆပ်ခဲ့ တာတောင် မင်းက သူ့ ကို မုန်းနေသေးတယ်….”
“အစ်ကို ဘာပြောလိုက်တာလဲဟင်….ပြန်ပြောပေးပါနော်…အရာရာအားလုံးဆိုတာ ဘာကိုပြောတာလဲဟင်…….ကျမကိုပြောပြပါနော်……ကျမ တောင်းပန်ပါတယ်…….”
“ မင်းသိပ်သိချင်နေသလား လင်းငယ်…..”
“ငိုမနေနဲ့လင်းငယ် မင်းသိပ်သိချင်တယ်ဆိုရင်…..ရော့….ဒီမှာ ဖိတ်စာ…ငါ့ ရဲ့ မွေးနေ့ ပွဲ…မင်းသိချင်တယ်ဆိုရင် လာခဲ့ ပေါ့……..ဒါပဲ ငါသွားပြီ……”
ကိုမင်းဇော်လဲ အူးပေလိုပဲ အချစ်တွက် အရာရာစွန့် လွှတ်နိုင်သူရယ်ပါလေ..
အင်း ကိုမင်းဇော် တစ်ယောက်ဟာ
အူးဗိုက် လို ရှက်တွေလှိမ့်မထုဘဲ ကြောင်မသွားတာကိုဘဲ ကျေနပ်ဘာတယ် ။
ဒါနဲ့ ဇါတ်သိမ်းမှာ ပေးစားမလား ဆိုတာ စောင့်နေမယ်နော
ဇာတ်ရှည်ချက်ကတော့ ပိုးမင်းသားနဲ့ သိုင်းဝိဥာဉ်အတိုင်းဘဲ